Last nohavaozina: Mey. 21 2019 | 2 min namaky
Fahavaratra no fotoana tonga lafatra mandaka indray sy mankafy ny fotoana amin'ny namana sy ny fianakaviana mitovy. Tsy tanteraka ihany koa ny fotoana mba hankafy-hilalao, Tsy ny nandositra-of-the-bary daty. Jereo ireo tsy manam-paharoa dimy fahavaratra hevitra daty izay azo antoka ho lefy ho fahatsiarovana lehibe ela taorian'ny hafanana efa nitete.
Canoeing Adventures: Raha toa ka misy ny renirano, na farihy lehibe lavitra any ho any ao anatin'ny mitondra fiara, misy tsara vintana tsara tarehy fa misy ihany koa ny fanatitra toerana lakana (na hanao kayak) Rentals. Maro amin'ireo orinasa ihany no misokatra mandritra ny vanin-taona mafana, ka tandremo tsara ny boky ny traikefa nahafinaritra ampy mialoha lavitra fa tsy ho dia aoka hidina miaraka amin'ny fahadisoam-panantenana ny tonga tamin'ny toerana iray ihany no mba nahita rehetra efa misy sambokely teny ho an'ny andro. Toerana toy ny Groupon matetika manana efaha amin'ny Rentals toy izany koa, ka ny fanangonam-bola amin'ny alalan'ny mampiasa ny iray amin 'ireo atao koa ny tolotra ho mety. Entana ny sakafom-pitsangantsangananay amin'ny tantera-drano fitoeran mba samy ianao sy ny daty tsara sakafo mandritra ny traikefa nahafinaritra.
Frisbee na Mini Golf Zava-tsarotra: Skip ny maizina Bowling Alley nandritra ny vanin-taona mafana, ary misafidy na iray aza amin'ireo safidy golfing fa mahafinaritra. Raha Golf Mini mazàna ny ho "azo antoka" safidy ho an'ny olona loatra ny / ny fanatanjahan-tena fahaiza-manao, athletically kokoa tia ny mety te-haka vintana ka jereo Frisbee Golf an-toerana mazava ho azy. Tsy vitan'ny no asa roa ireo ny fitandremana tanteraka amin'ny helo-drano hafahafa mampangina, fa ry zareo ihany koa fomba lehibe ny hahazo tombontsoa bebe kokoa ny mampiaraka, rehefa manampy azy ireo mahatakatra ny fametrahana lavorary / manipy teny. Hamita ny daty eny amin'ny nankany iray ny oram-panala ao an-toerana cone shack-raharaha hafa matetika ihany no misokatra nandritra ny fahavaratra.
Dog Park Dates: Raha toa ianareo sy ny daty dia nazoto alika tia, Tsy ilaina ny hiala ny canine namany aoriana rehefa lohan'ny handroso ho amin'ny hariva ny mahafinaritra. Raha tsy mahazatra fa tsy ho azy ireo mba ho nikatona nandritra ny ririnina, indrindra eo an-toerana dia misokatra zaridaina alika nandritra ny fahavaratra. Raha azo atao, Aza hadinoina ny mamaky famerenana an-tserasera sy ny fikarohana na ny fitsipika manokana ho an'ny alika manokana zaridaina alohan'ny nitondra ny alika sy ny daty ho azy ireo. Raha tsy misy zaridaina alika toa misokatra ao amin'ny faritra misy, misafidy ny manokana ny alika-mandeha amin'ny daty manan-danja hafa koa ny mety ho safidy hafa fa mahafinaritra. Tandremo mba hitondra niaraka fanampiny rano mba aina rehetra mahafinaritra anao ka hydrated nandritra ny daty.
Outdoor Theater hariva: Manararaotra ny mafana hariva sy hianatra bebe kokoa momba ny zava-kanto ao an-toerana ny sehatra. Maro ny tanàna maimaim-poana na vidiny mirary ho an'ny teatra tapakila ho an'ny zava-mitranga eny an-kalamanjana, amin'ny fampisehoana kira miainga avy amin'ny tantara mba Choir Shakespearean rindran-kira. Fatorana eo an-toerana ihany koa matetika manao mampiseho amin'ny toerana ankalamanjana isan-karazany nandritra ny vanin-taona mafana ihany koa. Raha toa ka tsy misy manao zava-kanto ivelan'ny trano safidy toa misy ao amin'ny faritra misy, Diniho mijery na fiara-in sarimihetsika teatra fa tsy; na dia tsy mitovy efa ho velona toy ny fampisehoana, fiara-in teatra mbola manana toetra tsy mety lany andro anankiray ho azy ireo.
Geocaching: Na dia ara-teknika dia tsy asa izany fotsiny ihany ny vanin-taona mafana, vintana tsara kokoa ny tsara kokoa toetr'andro tokoa tsy hanimba ny vintana ny manana geocaching mahafinaritra nandritra ny daty. Mindrana ny GPS mandrindra ny rafitra avy amin'ny namana, na mampiasa ny finday avo lenta mba hanampy anao eo amin'ny fikarohana, ary eo an-toerana fikarohana geocaches talohan'ny manomboka avy eo amin'ny daty. Aza adino ny mitondra nanaraka ny zavatra mahafinaritra ho anao sy ny daty ny hiala ao amin'ny cache!